SharePoint 2016 वास्तुकला: विकासकर्ताहरूको लागि नयाँ के हो? - आईटी टेक स्कूल
Sharepoint 2016 मा नयाँ के हो?
सुधारिएको प्रदर्शन - स्मार्ट
बुझ्न सजिलो - सरल
सुधारिएको सुरक्षा - सुरक्षित
Sharepoint एक माइक्रोसफ्ट अनुप्रयोग हो जुन माइक्रोसफ्ट अफिसमा समावेश छ। 2001 मा प्रचारित, Sharepoint अनिवार्य रूपमा भण्डारण प्रणाली र कागजात व्यवस्थापन को रूपमा बेचेको छ, तर वस्तु अत्यधिक विन्यासयोग्य छ र प्रयोग सम्बद्धताहरूको बीचमा उदार रूपमा विरोध गर्दछ। यो गतिशील र साझेदारी लिफाफेमा कागजातहरू पुन: प्राप्त गर्न म्याप गरिएको छ। रोबोट गरिएको कार्य प्रक्रियाहरू भवन वर्गहरू दिनुहोस् र अनुप्रयोग सुधारले अवसर लाभार्थीहरू स्तरवृद्धि गरेर SharePoint डेटा व्यवस्थापन ढाँचाको बारेमा बुझ्दछ। विकास गरिएका तत्वहरू डेटाबेस क्याचिंग र सामग्री-मानसिक स्विचन व्यवस्थापन हुन्। यसले डेटाको जीवन चक्र विनियम गर्न बाहिरको बक्स डाटा व्यवस्थापन दृष्टिकोणलाई कार्यान्वयन गर्दछ।
Sharepoint को विविध संस्करणहरू छन् जुन विशिष्ट क्षमताहरू छन्:
SharePoint अनलाइन माईक्रोसफ्ट अफिस 365 महिना महिना वा वार्षिक सदस्यतामा प्याकेज गरिएको सबैभन्दा बढी भागको लागि हो, अझै पनि बाहिर र बाहिर प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो समन्वय प्रयास, फाइल होस्टिंग, र कागजात र सामग्री व्यवस्थापन अवस्थाको केन्द्र व्यवस्थाको लागि प्रतिबन्धित छ, र लगातार ताजा ताजा छ।
यहाँ4फरक कारणहरू किन संघहरू SharePoint छनौंट गर्नुहोस्:
यो क्षमताहरू र तत्वहरू व्यापक छन्
कार्यालय 365 सँग रिच र गतिशील एकीकरण
माइक्रोसफ्टले SharePoint को भविष्यमा तीव्रतापूर्वक राखिरहेको छ
बाहिरको कोन्टेन इन्टरनेट जस्तै आउट-को-कन्टेनर समाधानहरू मात्र तपाईंको SharePoint इन्ट्रानेट सुधार गर्नुहोस्
Sharepoint 2016 एक बहुमुखी पहिलो र क्लाउड पहिलो प्वाइन्टको साथ बनाइएको छ, दुई अस्थायी द्वारा संसार लिइरहेका कुराहरू।
Sharepoint मा धेरै तत्वहरू छन्। उल्लेखनीय व्यक्तिहरूको एक भाग तल निर्दिष्ट गरिएको छ।
अनुक्रमित स्तम्भको प्रोग्रामिङ बनाइयो। यसले 5000 दृश्य किनाराको साथ कार्यभार र अपूर्ण रूपमा फैलिएको छ।
क्रस नस्ल खोज मोडेल एकीकृत अंक लिङ्कहरू र सामग्री दुवै Sharepoint Online र On-Preface बाट slithering प्रदान
2GB बाट 10GB बाट लुकेको टाढाको फाइल आकारको निर्धारित फिर्टीस्ट कप्तऑफ। सामाग्री एक्सटेन्सनको ल्यान्ड बाइटहरू यसको 2016 रिलिजमा बलियो बनाइन्छ।
प्याक सामेल गर्नुहोस् - Sharepoint 2016 सँग ग्राहकहरूले फिचर प्याक भनिने ताज़ाता देख्नेछन् जुन Office 365 मा On-Premises मा Sharepoint को लागि उपलब्ध अद्यावधिकहरू ल्याउनका लागि उनीहरूको दृष्टिकोण आउँछन्।
यस सफ्टवेयरको 2016 संस्करणले अर्को तत्व प्रस्तुत गरेको छ, MinRole, जुन पठाउने स्ट्रिमलाई पठाउँछ, गुणस्तर निष्पादन र असक्षम पार्दछ, र खेती बहुमुखी सुविधालाई सुविधा दिन्छ। म्युरोरोले फिक्स गर्ने प्रयास गर्दा कम्तीमा कम्तीमा जटिल हुन्छ र प्रशासन मध्ये प्रत्येक कडा कूटबन्धन हुनसक्दछ, यसलाई प्राकृतिक रूपले अघिल्लो अनुकूलन भन्दा बढी चम्किलो मात्रामा परिणत गर्छ।
न्यूनतमरोल हाइलाइट। Sharepoint सर्भर 2016 मा यो नयाँ उपकरणको उपयोग गरेर, Sharepoint फारम प्रशासकहरूले प्रत्येक सर्भरको भाग खेत टोपोलोजीमा विशेषता देखाउन सक्छन्।
SharePoint 2016 एक indistinguishable codebase मा आधारित Office 365 बाट आधारित छ। यो सबैभन्दा स्थिर, ठोस रूपमा मानिन्छ र सबैतिर वरिपरि प्रयास गरिएको माइक्रोसफ्ट वस्तु जुन जुन पहिले नै लाखौँले प्रयोग गरेको छ। माइक्रोसफ्टको अनुसार, समान कोडबेसलाई SharePoint को कुनै पनि भविष्य को प्रतिपादनको लागि प्रयोग गर्न आवश्यक छ।
हालको शेयरबिन्दु संस्करणमा स्पर्श-समायोज्य इन्टरफेसको साथ। यसले सेलफोन वा ट्याब्लेटमा यसको प्रयोगको अनुभव बढाउँछ।
यूआई वृद्धि र अनुप्रयोग सुरुवातकर्ता र जुन सबै SharePoint 2016 वा Office 365 अन्वेषण गर्ने छ।
माइक्रोसफ्ट प्रवाह- शेयरपोइन्ट कार्यप्रवाह अझै जीवित र ठोस छ। आजको आवश्यकता नियमित रूपमा एक टन बढि हुन्छ, र यसले केवल खुल्ला SharePoint र नयाँ प्रवाह भन्दा बढि लिन सक्नेछ।
SharePoint 2016 को हाइब्रिड व्यापारको लागि OneDrive बहुमुखीतामा थपिन्छ। यसले ती व्यक्तिहरूलाई क्लाउड प्रशासनमा क्रमशः सार्न उत्तीर्ण गर्न को लागि सरल बनाउँछ। हालैको शेयरपोष्टको साथ, ग्राहकले आफ्नो ओभर-प्रिजमेन्ट मेरो साइट्स / OneDrive होस्ट SharePoint Online लाई OneDrive को व्यापारमा बदल्न सक्छन्। यसले तिनीहरूलाई उनीहरूको फाईलहरू कुनै पनि क्षेत्रबाट प्रयोग गर्न स्वतन्त्रता दिनेछ।
समूह साइटहरू - SharePoint टोली साइटहरू ताजा पार्दै छन्, र त्यसै गरी स्वाभाविक रूपले एक बनाउनेछ कार्यालय 365 समूह। अर्को तरिका अतिरिक्त रूपमा उत्कृष्ट छ, जबसम्म एक अफिस समूह बनाउनेछ, यसले तपाईंलाई पूर्ण, वर्तमान दिन टीम साइट दिनेछ।
वर्तमान मा ग्राहकले एकल ट्यांकको साथ कागजात लाइब्रेरीमा पोष्ट गरी तस्विर र रेकर्डिङ को लागी हेर्न सक्नुहुन्छ।
यसको सट्टा मात्र प्रतिकृया गर्नुको साथै, हालको माइक्रोसफ्ट साझा बिन्दु क्लाइन्टले कागजातहरू वा डेटाबाट एसएमएस गर्न SharePoint बाट बनाउनका लागि समस्याहरू सार्न सक्छ।
यसले अन्त-क्लाइन्ट र प्रशासकहरूका लागि अधिक सुरक्षा प्रदान गर्दछ जुन दुवै स्पष्ट र क्लाउड जोडिएको स्थिरता संग। यो सूचना अधिकार प्रबंधन (आईआरएम) क्षमताहरु संग पुनरारंभ गरेर डाटा सुरक्षित गर्न र व्यापारका लागि OneDrive को साथ Sharepoint पुस्तकालयहरुमा डेटा सुरक्षित गर्न को लागी।
SSL 3.0 मा, सुरक्षा असक्षमता फेला पर्यो, जुन प्रोग्रामरलाई जानकारी अनलक गर्न अनुमति दिन्छ। यो काउन्टर गर्न केहि हालको शेयरपोइन्टले अब हाइलाइट गर्दछ SSL 3.0 एसोसिएसन एन्क्रिप्शन निश्चित रूपमा निश्चित रूपमा, र निश्चित एन्क्रिप्शन गणनाहरू (उदाहरणका लागि RC4) ज्ञात समस्याहरूसँग।
SharePoint 2016 निर्वहन राउन्डको साथमा, यस अत्यधिक प्रत्याशित संस्करणको सख्त र सक्षम पार्ने क्षमता क्षमताहरूसँग निस्क्रिय रूपमा आईटी प्रशासकहरूको बहुसंख्यक तपाइँको अर्को सामग्री स्थानान्तरण अगाडी बढावा गर्न को लागी।
अभिनव प्रौद्योगिकी समाधान द्वारा पाठ्यक्रम
प्रतिभाशाली विशेषज्ञहरु को लागी रुचि को लागी, यो आपूर्तिकर्ता को तैयारी ड्राइभिङ्ग ड्राइभिङ्ग यो बढ्दो सफ्टवेयर ड्राफ्टमेनहरूको लागि Sharepoint प्रमाणन पाठ्यक्रम कन्कोक गरेको छ। यो पूर्ण कोर्सले सफ्टवेयरको सबै भागहरू समाविष्ट गर्छ र साझेदारीको वास्तविक वास्तविक समस्याहरूलाई बुझ्न मद्दत पुर्याउनेछ।